प्रवास Archives - Page2of4- Namaste Times
सोमबार, आषाढ ०२, २०७६ | Wednesday, June 7, 2017
कतारमा तत्काल नेपालीलाई अप्ठ्यारो छैन, पछिको संकेत कस्तो ?
काठमाडौ कतारस्थित नेपाली द्तावासले नेपालीहरुलाई कुनै समस्या आइ नसकेको र परिस्थिती सामान्य रहेको जनाएको छ। द्तावासले मंगलबार अपरान्ह पराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा कतारस्थित नेपालीलाई कुनै समस्या नआएको उल्लेख छ। कतारस्थित नेपाली राजद्त रमेश कोइरालाले नियमित रुपमा कतारी बिदेश मन्त्रालय लगायत निकायसंग समन्वय गरी परिस्थितीको जानकारी लिइरहेको दोहास्थित द्तावास उपप्रमुख मणिरत्न शर्माले टेलिफ...
काठमाडौं : एक सेकेन्ड पनि पतिसँगै देखभेट नगरी हकदारका रुपमा ९० लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दा नन्दनी माली अचम्ममा परेकी छन् । रुपन्देही शुद्दोधन नगरपालिका निवासी उनी कतारको दोहामा ज्यान गुमाएका पति नन्दकुमार पासीको वियोगमा छिन् । उनीहरुको जोडी अभिभावकले बाल्यकालमै जुराइदिएका थिए । वैदेशिक रोजगारका लागि कतारको दोहामा रहेका २३ वर्षीय नन्दकुमारको कामकै सिलसिलामा ज्यान गएको हो । नन्दकुमार १८ वर्षमा कतार ...
गर्भवती महिलाले के खादा गर्भपतन हुन सक्छ ?
गर्भावस्था निकै जटिल तथा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । आमा र गर्भको शिशु दुबैको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि यो समयमा निकै ध्यान पूराउनुपर्ने हुन्छ । गर्भवती महिलाहरु खासगरी काँचो तथा कम पाकेको खानेकुराबाट बँच्नु पर्दछ । यी खानेकुरा गर्भवती महिलाको गर्भपतन गराउन सक्ने जोखिम हुन्छ : १ काँचो दुधः राम्रोसँग नउमालेको काँचो दुध पनि गर्भवती महिलाले खानु हुँदैन । यसले पनि फूड प्वाइजनिंग गराउनुका साथै विभिन्न खाल...
जनयुद्धले जुराएको जोडी गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार
ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार खड्क योगी ‘अनिल’ र सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार बनेकी चम्पा कार्की ‘आशा’ नाताले पति-पत्नी हुन् । उनीहरु दुवै माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।चम्पाले युद्धका क्रममा एउटा हात गुमाएकी छन् । कार्की यसअघि संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार भए पनि सभासद हुन पाइनन् भने योगी पनि पुराना र अवसर नपाएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।राजनीतिक रुपमा दुवैज...